आज सबै देशको मूल्य बढ्यो, कुन देशको कति ? – SN-One of the news portal in Nepal
आज सबै देशको मूल्य बढ्यो, कुन देशको कति ?
सवाल नेपाल २०७६ बैशाख ३, मंगलवार ०६:४८ मा प्रकासित
काठमाडौँ । आज मंगलबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको मात्रै डमुल्य बढेको छ। धेरै देशमो मूल्य सामान्य रुपमा ओरोलो लागेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ७८ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय ११ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४५ रुपैयाँ २४ पैसा, १ सय ४६ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६४ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ६६ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर २ सय ९३ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर २ सय ९५ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ। तालिकामा हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य देशको विनिमय दर
सुनको मूल्यमा फेरी नयाँ रेकर्ड, तोलाको कति पुग्यो ?
आज बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?
संगम स्वीट्सको नयाँ शाखा खुल्यो
हेर्सुनुहोस आजको सुन, चाँदीको भाउ बढ्यो
आज कति छ सुनको भाउ ? हेर्नुहोस्
झापामा बिषादी मापन उपकरण नाममा छ काममा छैन !